Soosaarayaasha Alaabada Isdhexgalka - Shirkadaha Alaabada Isdhexgalka Shiinaha & Warshad
Eyga Frisbee Flying Disc Butter Interactive Toy Training Flyer
Tilmaamaha Tilmaamaha Lagu sameeyay caag dabiici ah, jilicsan oo jilicsan. Dusha sare, xoog leh oo qaniinyo u adkaysta. Ku fiican ciyaaraha xiisaha leh ee tuurista iyo qabsashada. Jilicsan oo ku filan oo aan waxyeellayn ilkahaaga ama ciridkaaga, laakiin xoog leh oo ku filan si aad ugu duusho masaafo aad u badan. Waxay dhiirrigelisaa isdhexgalka waxay ka caawisaa horumarinta xiriirka ka dhexeeya adiga iyo xayawaankaaga. Qeexitaannada Midabka: Waxyaabaha Casaanka ah: Cabbirka / TPR Cabbirka: 22cm * 22cm Miisaanka wax soo saarka: 250g / 0.55lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan cusbooneysiino alaabtayada xilliyada ...
Eey Snuffle Mat Fooqashada Maple Caleenta Caleemaha Quudinta
Tilmaamaha Sharaxa 1. Ku qari cunnada fudud ama toy-ga yar ee ku yaal snuffle-ka, ka dibna u hoggaami eeyaha inay ogaadaan. Waxay kaa caawinaysaa inaad tababarto dareenka urta eeygaaga, iyo sidoo kale inaad daadiso tamarta eygaaga oo aad lumiso miisaankaaga. Roogga eeygan ayaa ka caawin kara eeyaha inay yareeyaan culeyska fekerka oo ay nastaan ​​markii aad keligaa guriga uga tagto. 3.Suulinta naqshadeynta caleenta khariidada, waxay u keentaa khibrada dabiiciga eeygaaga xitaa guriga, sidoo kale waad u laalaadin kartaa qurxin ahaan marka aan la adeegsan. 4.Sameeyay polyester ...
Eeyaha Snuffle Quudinta Quudinta Quudinta Cunnooyinka Bowl ee Gaaban
Astaamaha Sharaxa 1.Daraasaduhu waxay muujiyeen in urinta 10 daqiiqo ay u dhigantaa socosho saacad ah, lagana yareeyo culeyska fekerkooda, iyadoo la raadinayo lana kordhinayo la dhaqankaaga. 2.Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad dhigtaa cunnada fudud geesta derinkiisa, eeyguna wuxuu bilaabi karaa inuu adeegsado farsamooyinka quudinta dabiiciga ah, eyguna wuxuu yeelan karaa baashaal iyo tababar isla waqti isku mid ah. 3.Waa mid waara oo si fiican loo sameeyay, iyadoo la adeegsanayo wax tayo sare leh oo jilicsan oo polyester ah, suufka cuntada eeyga si loo ilaaliyo raaxada iyo adkeysiga, fududaanta in la dhaqo iyo ...
Pet Frisbee Interactive Denim Lafta Qaab Dog Calalinta Toy
Astaamaha Sharaxaadda Inaad haysatid toy-gan eeyahaaga waxay door muhiim ah ku leeyihiin caafimaadkooda, kaliya maahan ciyaar laakiin sidoo kale waxay jimicsi fiican ku heli karaan aaladdan is-dhexgalka leh iyagoo ordaya oo qabanaya Frisbee. Waa hab wanaagsan oo lagu dhisi karo dammaanad gaar ah adiga iyo xayawaankaaga, waxay kaloo kaa caawin kartaa eygaaga inuu dilo waqti caajis ah iyo inuu ilkahiisa nadiifiyo. Ka samaysan dharka denim oo loogu talagalay qaabka lafaha, taas oo dabacsan, adkeysi leh oo jilicsan. Waa hadiyad ku habboon eeygaaga! Midab sooca: Denim ...
Isboortiga Ey Isboorti Dog Rugby Ball Outdor Flying Puppy Toys
Astaamaha Sharaxaadda Tani waa cayaar kubbadeed rugby ah oo loogu talagalay eyda. Qalabka lagu ciyaaro ee qaabka rugby-ga ah, markaa way fududahay in eeyahaaga aad soo jiidato, waxay ka samaysan tahay maadada cinjirka 'latex material', waa jilicsan tahay, bey'ad u fiican tahay oo waari kartaa. Sidoo kale waa kuu fiican tahay inaad dhexgal la yeelato eeyahaaga, kor u qaadida xiriirka ka dhexeeya adiga iyo xayawaankaaga rabaayadda ah. Qeexitaannada Midabka: Waxyaalaha buniga ah: Cabbirka Latex: 11cm dhererkiisu waa miisaanka alaabta: 38g / 0.08lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan cusbooneysiinno badeecadeenna xilliyada qaarkood si aan u sii wadno ...
DogcToy Oxford Fabric Chew Toy Dibadda Tababarka Stick
Tilmaamaha Astaamaha 1. Tooshka qaniinyada iyo tababarka amniga ee toy-ka. Ka ilaali eeyaha xoqida iyo qaniinyada. 2.Waxaa kufiican tababarka eyda yar iyo kuwa dhexe iyo ciyaar is-dhexgal ah. 3.Made laga sameeyey dharka Oxford ee u qalma, barkin boodhku waa mid waara oo waara. Qeexitaannada Midab: Casaan / Oranjo / Buluug Waxyaabaha: Maqaarka Oxford Cabbirka: 6cm * 28cm Culayska alaabta: 38g / 0.08lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan cusbooneysiinno badeecadeenna xilliyada qaar si aan u sii wadno feejignaanta horumarka ugu dambeeyay ee la xiriira eeyaha a ...
Qari Doy Toy Oo Raadiya Waxyaabaha Lagu Xasuusto ee Xaragada ah
Astaamaha Sharaxaad Ka samaysan waxyaabo tayo sare leh oo waara, oo ka hor tagi kara ka jeexitaanka qaniinyada xayawaanka si fudud. Jiirarkan qaylo-dhaanta ah ayaa eeyahaaga sii wata inay ku ciyaaraan waqti dheer codka jabaqda ah ee ay jecel yihiin. Kaalay 3 jiir jiir ah oo jilicsan iyo 1 sal adag oo dheeri ah oo dheeri ah. jiirkii cufnaa, oo haddana dib u bilow! Tilmaamaha Midabka: Saldhiga rootiga buniga ah + Jiirka jiirka fudfudud Qalabka Waxyaabaha: Plush Pr ...